Isiokwu a gosiri na ị n'elu 10 Secure Flash draịva, nke nwere ike inyere gị aka iji chebe gị mkpa faịlụ ma ọ bụ nzuzo si leakage.
Secure flash draịva na-mepụtara maka nche maara ọrụ iji jide n'aka na ha ibufe mwute ma ọ bụ ihe ọ bụla ụdị ọmụma enweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe dị ka adian draịva igbachi ala data na mgbe ahụ njem na-aghọ mfe na mfe. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na agbakwunyere Koodu na nche na-arụzi ụgbọala ozugbo n'ahụ na ala flash mbanye ga-eduga data nhichapụ na Ya mere ọjọọ ga-enwe ike ịchọta ihe ọ bụla jidesie usoro na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-rụrụ site na ndị a draịva.
10 na-ewu ewu ala flash draịva
N'okpuru ebe a bụ top iri ala flash draịva ndị e gosiri na site ọrụ dị iche iche edemede na ọ na-eme ka n'aka na nke kacha mma e nyere na okwu nke data nche:
1. Iron Key onye D200
Rating na okwu na kpakpando
4.0 Ọ nke 5.0
The ọkaibe imewe na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụghị nanị gbachiri data ma na-emekwa ka n'aka na ọ bụ mgbe inweta. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere ngwaọrụ e gosiri elu site ọrụ ha chọrọ inwe ya n'ihi na ha onwe onye mkpa.
2. Kanguru Ọnọ J.Randall
Rating bụ okwu na kpakpando
The n'ozuzu arụmọrụ a haziri iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ala nke nkà na nke ọma okodu omume nke ga-nwekwara encrypt data e wezụga azọpụta ya. Onye ọ bụla maara na ọ gaghị ekwe omume na-ahụ na AES izo ya ezo gbajiri.
3. SanDisk Oke ngwe
5.0 Ọ nke 5.0
SanDisk bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe data nchebe ụlọ ọrụ na-mepụtara a nna ukwu ibe. The nche validations na-mepụtara na ụlọ na ụlọ ọrụ emewokwa n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe kasị mma nke ihe e nyere ha na nke a.
4. Disk Go ala nlekọta
3.0 Ọ nke 5.0
Ọ bụkwa otu nke kasị mma enyi nke ndị niile na ndị ọrụ chọrọ iji jide n'aka na ha data anọgide nchebe oge niile. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na mbanye na-eji dị ka kwa ntuziaka na-abịa tinyere zere ihe ọ bụla nke na nsogbu.
5. Data Ediwak Ebiet volt Nzuzo Edition
Ọ na-mepụtara Kingston Inc. na mgbe a mara maka kasị mma na ndị ọkaibe ngwaahịa na okwu nke data nchekwa, nchekwa na nche. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ naanị ma ọ bụrụ mbanye na-eji dị ka ụdị na anam nke na ọ e mepụtara. The agbakwunyere data izo ya ezo na-emekwa ka n'aka na data bụ n'ihu chekwaa ya.
6.-awụlikwa elu Drive Secure II gbakwunyere
Ọ na-e gosiri elu n'ihi na eziokwu na price bụ dịtụ ala na ohere nchekwa na nke a bụ iji izute mkpa na-achọ n'aka nke onye ọrụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na mbanye e mepụtara site Lexar Inc. na mara maka ya data izo ya ezo ọrụ. Na mgbakwunye na ngafe Koodu na ndị ọzọ na nchekwa na-arụzi ụgbọala mbanye na-ezoro ezo na data izo ya ezo ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-nyere ka onye ọrụ na nke a.
Ọzọ egwu tech mpempe a ala USB na-ahụ na ndị kasị mma e nyefewo ha n'aka onye ọrụ na nke a na ha data anọgide nchebe oge niile. Ọ na-na-kwuru na agbakwunyere na USB 3.0 interface n'agbanyeghị nke ịbụ nchebe nyefe gbapụrụ ọsọ na-eju anya elu nke na-eme ya mbụ oke nke onye ọrụ na nke a.
8. Kanguru Ọnọ 2000
Ọ bụ ọzọ otu nke kasị mma nyiwe na-agbakwunyere na AES izo ya ezo. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a nwekwara ike ime ka n'aka na data na-agafere na dịtụ ala gbapụrụ ọsọ dị ka tụnyere ndị ọzọ na ụdị na-ọ bụ n'ihi na eziokwu na USB 3.0 interface akwadoghi a mbanye.
9. Kingston Data Ediwak Ebiet 4000
Dị ka a ngwa ngwa na ọnụ data ejegharị ejegharị ngwọta a USB na-erite na-chekwaa na s ọtụtụ okwuntughe dị ka onye ọrụ na-enwe mmasị. The elu fim bụ nakwa n'ihi Kingston aha na ndị a pụrụ ịdabere na ha mgbe niile gosiri mgbe ọ na-abịa ha na ngwaahịa.
Njikere anapụta ndị kasị mma ka ọrụ eriri mbanye dị ka hụrụ nwere ike paswọọdụ echebe aka na data nwekwara ike-akpọchi iji jide n'aka na ihe kasị mma ọrụ-nyere onye ọrụ. The n'ozuzu fim nke ngwaahịa na-egosipụtakwa na ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe mpempe na e mepụtara.
Ụzọ ka mma data nche
Na-esonụ bụ ụfọdụ Atụmatụ na onye ọrụ kwesịrị ime n'elu iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-enwetara:
1. The iyi egwu ekwesịtụghị eleda na irrespective nke ya size na ike ndọda kwesịrị ekwesị jikoro kwesịrị iwere iji wepụ ya kpam kpam.
2. Olee ebe abụrụ egwu na a ga-iwere na-echebara ọrụ ekwesịghị ileghara na ndị agadi ka bụ arụmọrụ ha kwesịkwara-enyocha maka.
3. Advanced nlekota na-egbu osisi usoro kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-etinyere ka onye ọrụ gburugburu ebe obibi na ebe etipúru etipú nakwa dị ka data ije bụ esoro na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ ikwe ụlọ ọrụ na--ihe ozugbo omume tupu mmebi e mere.
> Resource> Flash Drive> Top 10 Secure Flash Drive n'ihi na gị data nche